JANET JACKSON, CARDI B, WEEKND I ZULITE EGO MAKA NDI OBIAM UWA
Home desert casino viejas casino & willows hotel
Otu akụkọ ndiichie Janet Jackson na onye na-agbapụta ọsọ ọsọ bụ Cardi B ga-ekwu maka ememme Citizen nke zuru ụwa ọnụ na New York iji kwado nkwado maka ịchekwa enyemaka mba ụwa iji kpochapụ ịda ogbenye.
Ndị nkatọ a na-ekwukarị bụ Janelle Monae, R & B sensation The Weeks, onye na-eme ihe nkiri songwriter John Legend na-eto eto pop star Shawn Mendes ga-egwu September 29 ememme na Central Park, ndị nhazi mara ọkwa Tuesday.
BUHARI GBARA UME KA AGHA NA-EME KA A GHARA IBA UBA RUO ECOWAS
Na-eme kwa afọ kemgbe 2012 ka ndị isi ụwa na-ezukọ na New York maka UN General Assembly, Global Citizen na-ekesa tiketi n’efu na ndị na-akwado ndị na-ekwe nkwa ime ihe dị ka izigara ndị gọọmentị akwụkwọ ozi iji kwado enyemaka enyemaka.
Citizen zuru ụwa ọnụ ejirila nke nta nke nta gbasaa ya na mbipụta ụwa na mkparịta ụka panel ma na-eme atụmatụ ememe ukwu na Johannesburg na Disemba 2 nke Beyonce na Jay-Z duziri iji gosi akara afọ nke ịmụ mpihe apartheid icon Nelson Mandela.
Ebube Central Park kachasị mma bụ otu akụkụ iji kwado echiche enyemaka nke ndị mba ọzọ, nke President Donald Trump kwuru na ọ bụ otu ụzọ n’ụzọ atọ ka isi nke mbụ nke “America First”, ọ bụ ezie na o zutere mgbochi na Congress.
Hugh Evans, bụ CEO nke Global Citizen, kwuru na a ga-atụle ememe ahụ karịa 60,000 mmadụ, ọ ga-achọkwa ka ndị ndú ụwa na-alụ ọgụ iji melite ahụike nne, njedebe nwa na-akwụsị ma belata plastics.
“Ọ dị mkpa ka anyị kwuo okwu – ma nọgide na-votu – ka e wee nụ olu anyị,” ka o kwuru.
Citizen zuru ụwa ọnụ setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ nke ịpị Group nke asaa ndị ọchịchị na-emepụta ememe onye kwuo uche ya iji nye $ 2 ijeri iji kwado ahụ ike nne, na-ekwu na ihe karịrị nde nne na ụmụaka nwụrụ n’afọ ọ bụla maka ọrịa ndị a na-egbochi.
Otu onye na-eme egwuregwu nke ọma bụ Cardi B, na ememme ahụ na-egosi ọkwa nke mbụ ya gosiri ebe ọ bụ na ọ mụrụ na July.
Nwa nke Bronx, onye buru ngwa ngwa ghọọ otu n’ime ụmụ nwanyị kachasị elu n’ime ụmụ nwoke na-ahụ maka hip-hop, na-adịbeghị anya ka ya na Bruno Mars na-eme njem na September, na-ekwu na ọ na-eleghara oge ole ọ chọrọ n’ụlọ na nwa ya nwanyị bụ Kulture .
BUHARI GA KWURU NDI UN GENERAL ASSEMBLY NA SEPT.25
Ememe nke September 29 ga-akwado ndị di na nwunye Australia bụ Hugh Jackman na Deborra-lee Furness, na ndị agha na-agụnye Forest Whitaker na Naomi Campbell.
Obodo Citizen zuru ụwa ọnụ na-agbanye aka iji kwado ihe mgbaru ọsọ UN Sustainable Development, bụ nke na-achọ ka njedebe nke ịda ogbenye kachasị njọ n’ụwa 2030.
NDI AGHA GBURU MMADU 7, WEGHACHITE OGU NKE BOKO HARAM